Ukuze uqonde imveliso yezixhobo kunye nenkqubela phambili yokomba inkqubela yokuthumela ngaphandle, i-sinovogroup yaya e-Zhejiang Zhongrui ngo-Agasti 26 ukuya kuhlola nokwamkela i-ZJD2800 / 280 ejikelezayo yokusasaza ukujikeleza izixhobo kunye ne-ZR250 yeenkqubo zodaka eziza kuthunyelwa eSingapore. Iyafundwa ...
1. Xa isixhobo sokugrumba esithe tyaba sigqiba iprojekthi, kufuneka kususwe udaka kunye ne-slag yomkhenkce kwigubu lokuxuba kwaye ukhuphe amanzi kumbhobho ophambili. 2. Ukutshintsha kwegiya xa impompo iyekiwe ukunqanda ukonakala kweendawo kunye nezahlulo. 3. Coca impompo yeoli yegesi kwaye uthintele umlilo ...
Amanyathelo okhuseleko kusetyenziso lwezixhobo zokumba imithombo yamanzi
1. Phambi kokusebenzisa isixhobo sokumba kakuhle, umqhubi uya kuthi afunde ngononophelo incwadana yokusebenza kwesixhobo sokumba kakuhle kwaye aziqhelanise nomsebenzi, ulwakhiwo, ukusebenza ngobuchwephesha, ukugcina ...
Kutheni i-hydraulic full pile cutter ithandwa kangaka
Njengohlobo olutsha lwezixhobo zokusika intloko, kutheni i-hydraulic full pile cutter ithandwa kangaka? Isebenzisa iisilinda ngesanti kubunzulu baphantsi ukucudisa umzimba imfumba ukusuka kumanqaku ahlukeneyo isiphelo ubuso tye efanayo kwi t ...
I-cutter cutter - oomatshini bobunjineli kunye nezixhobo ngokukodwa kwimfumba yekhonkrithi eqinileyo
I-cutter cutter, ekwabizwa ngokuba yi-hydraulic pile breaker, luhlobo olutsha lwezixhobo zokuqokelela imfumba, ezithatha indawo yeendlela zokuqhekeza kunye nezesiko. Sisixhobo esitsha esitsha, esikhawulezayo nesisebenzayo sokudiliza isakhiwo sekhonkrithi esenziwe ngokudibanisa iimpawu zekhonkrithi ...
I-SINOVO ejikelezayo yokujikeleza ukusasaza iirig yapakishwa yathunyelwa eMalaysia
I-SINOVO ejikelezayo yokusasaza ukujikeleza kusasazwa kwaye yathunyelwa eMalaysia ngoJuni 16. "Ixesha linzima kwaye umsebenzi unzima. Kuyenzeka ukuba ngexesha lobhubhane, ...